Nagarik News - 'रेखाको हस्तक्षेपले फिल्म छाडेँ'
13 Mar 2014 | 12:13pm
भट्टराई अस्वस्थ भएका हुनाले आफूले नै आराम गर्न फर्काइदिएको रेखाको दावी छ। अरु निर्देशकलाई भिœयाउँदा भट्टराईको अवमूल्यन हुने हुनाले निर्देशकको बाँकी जिम्मेवारी आफैंले सम्हालेको उनी तर्क दिन्छिन्।
बुधबार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि निर्देशक श्याम भट्टराईले प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छन्। रेखाको तर्कमा सत्यता नरहेको दावी गर्दै उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्ः
मेरो करिअरमा एउटा सिँढी थपिन्छ भन्ने सोचेर रेखा थापाजीको निर्माण रहेको 'हिम्मतवाली'मा निर्देशन गर्न म खुसीसाथ तयार भएको थिएँ। थुप्रै फिल्म निर्माणको अनुभव लिइसक्नुभएकी रेखाजीसँग चुस्त व्यवस्थापनको अपेक्षा थियो। व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ भन्नेमा मैले वारम्बार जोड दिँदै आएको थिएँ।
सुटिङ फागुन १५ देखि सुरु हुने तय भएको थियो। मैले एक हप्ताअघि नै सुटिङस्थलमा पुगेर निरीक्षण गर्छु भनेँ। उहाँले बाँकी कलाकार, आधी जसो प्राविधिक र बस्नेखाने, यातायात सबै उतैबाट मिलाएको जानकारी दिनुभएको थियो। म विश्वस्त हुन पनि अगाडि जानुपर्ने थियो।
सहायक बोकेर म महेन्द्रनगर निस्किएँ। त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो उहाँले विश्वास दिलाएका कुनै पनि तयारी भएको रहेनछ। अत्यन्तै अस्तव्यस्तताका साथ सुटिङ सुरु भयो। न प्रोडक्सन म्यानेजर, न कुक, न स्पटब्वाई, न क्यामरा बोक्ने गाडी? केही पनि थिएन। ओढ्ने, ओछ्याउनेको व्यवस्था पनि थिएन।
प्रोडक्सनबाट पाएको सुविधाको एउटै सिरकलाई डस्ना पनि, सिरानी पनि बनाएर बसेका कलाकार तथा प्राविधिकहरुका शरीरमा निस्किएका घाउखटिराका दागहरु सायद एक महिनापछि सबैले देख्नेछन्। कलको पानी पिउनुपर्थ्यो।
लोकप्रि्रय अभिनेत्री/निर्मात्री भएकीले उहाँ त्यो बस्तीमा बस्ने कुरै थिएन। स्थानीयको टायरगाडा भाडामा लिएर उहाँलाई ओसार्न मैले सोझा प्राविधिकहरुलाई बाध्यतावश दुःख दिएको छु। स्पटब्वाय नहुँदा निकै दुःख पायौं। व्यावसायिक कुक पनि थिएन। खानाको अस्तव्यस्तता थियो।
सुटिङ हेर्न आउनेलाई तान्दै कलाकार बनिदिन अनुरोध गर्नुपर्ने परिस्थितिमा एक निर्देशकले आफ्नो सिर्जनशीलताको कति सदुपयोग गर्न सक्ला? तर परिस्थितिलाई बु‰नुको सट्टा रेखाजीले सधैं मलाई ढिलो भयो भनेर दोष लगाउनुहुन्थ्यो।
'नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ कान्छो बाउको अनुहार' भएपछि उहाँलाई सचेत गराउनु मेरो कर्तव्य थियो। काठमाडौंमा छँदा मेरो काममा हस्तक्षेप नहुने सहमति भएको थियो। तर, उहाँले सहमतिको उल्लंघन छायाङ्कनको पहिलो दिनमा नै गरिदिनुभयो।
समस्याको निराकरण गर्नुको सट्टा मलाई पटकपटक पदमुक्त गर्ने धम्की दिनुभयो। हुन त मैले सुटिङ रोकेर सम्पूर्ण टोलीलाई फर्काउन पनि सक्थेँ। तर दैनिक रोजगारी गरेर छाक टार्नुपर्ने मजदुर साथीहरु, जसले १० प्रतिशत मात्र पेश्की लिएका थिए, उनीहरुको श्रमको मूल्य पनि रोकिन्थ्यो। त्यसैले मैले त्यो गर्न सकिनँ।
म आफैं त्यहाँबाट निस्केर राजमार्गको होटलमा आएर बसेँ। त्यसलगत्तै रेखाजीका पूर्व पार्टनर छविराज ओझाले मलाई फोन गरेर आफ्नो मातहतका सबै काम सकाएर मात्रै हिँड्नु भन्ने सुझाव दिनुभयो। रेखाजीबाट केही खबर आउँला भनेर मैले पर्खेँ। तर उहाँमा कमजोरी स्वीकार्ने र सुधार्ने सम्भावना न्यून देखियो।
मेरो मन मरेपछि म त्यहाँबाट निस्किएँ। काठमाडौं आइपुगेपछि थाहा भयो, म बिरामी भएर थप उपचारका लागि पठाइएको रहेछु। म आउनासाथ रेखाजी निर्देशक नै भइसक्नुभएछ। आफ्नो अनुकूल हुँदा प्रयोग गर्ने अनि पछि फ्याँकिदिने उहाँको पुरानो स्वभाव समस्त फिल्मकर्मीहरुले बुझेकै छन्।
« स्विफ्टको कमाइ उत्कृष्ट होली खेल्दै फिल्मको प्रचार »